Hay’adda ICG oo ku baaqday in wada-hadal lala galo Al-Shabab – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Hay’adda ICG oo ku baaqday in wada-hadal lala galo Al-Shabab
June 22, 2022 Xuseen 5
ICG lafteedaa abuurta kooxaha dagaal yahanada si dhaqaale iyo shaqo joogto ah u helaan,adinkuna waxaasaad dadka war uga dhigaysaan!!
Western world mentality works differently, one of their stupid mentality says “mushkilo abuur deetana xalli si dadka kuugu arkaan mid mushkiladaha xal u hela ” hada yaa maalgeliya kooxahaan??? Jawaabta yaan lagaa xadin intaanad dhegahaaga gaadhsiin..
Al shabab waba laga taqaluse maxa wada hadal lalagalaa shuubaa idin dhashe
ICG ayaa ka dambeeyey xayaysiiskii Weriye Jamaal u samaynayey nimankaas dadka dubta.
Aniga waxaan ku talin lahaa in kooxda mayalka adag ee xarakada shabaabul mujaahidiin lala hadlo. Oo lagu heshiiyo ku dhaqanka shariicada islaamka, ciidamada shisheeyaha dalka ka baxaan.
Ururkaanu waa ciidan qabaailo leeyihiin oo danahooda ku fuliyaan oo Marka kalena ayaga laftigooda Dib ugusoo Noqda oo baada oona qarxiya.
Hadii Cid la xaajoonoyso hadee cida ay ka dhasheen ee ku adeegata ee ay dhibta ku hayaan hala xaajoodaan… ama ha iska celiyaan.
Jini ninkii keena ayaa bixiya.